Gentoo: Obi nke Anụmanụ | NwetaLeta | ChrisADR | Site na Linux
ChrisADR | | Nkesa, GNU / Linux, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Chaị, a na m ahụ nnabata nnabata na obere onyinye m, ọ na-akwali m karịa ka m nwee ike ịga n'ihu na-ekerịta obodo a mara mma. Amaara m na ekwela m nkwa nke na-erughị usoro 20, mana ị ga-eri obere agụụ ka ọ dị ugbu a… Agaghị m ebido nkuzi Gentoo na-enweghị ịkwụsị ikwu maka obi ya yana ike ya niile. Ọdụ ụgbọ mmiri, njikwa ngwugwu gị. Ọzọkwa, dị ka onye ọrụ Gentoo na-eguzosi ike n'ihe, echere m na ọ ka mma ịghọta tupu ikwugharị, na nke a Achọrọ m ikwu na tupu ịmalite ntuziaka dị mfe otu esi edepụta ederede (ikwugharị),, ọ dị mma ịmata ihe anyị na-eme nke ahụ dee edemede. Dị ka okwu a ma ama:
"Nye mmadụ azụ ma ị ga-emyụ agụụ ya maka otu ụbọchị, kuziere ya ịkụ azụ ma ịchekwaa ya maka ndụ."
N’etughi oge ozo, ka anyi bido:
1 Gịnị bụ ngaji?
2 Gịnị mere o ji dị mkpa ịma nke a?
3 Obi Portage:
4 A lee anya na obi:
4.1 EBERE / NWOKA:
4.8 Kaadị vidiyo:
5 / wdg / portage:
6 Ntakịrị ọzọ:
Gịnị bụ ngaji?
Ọdụ ụgbọ mmiri, bụ njikwa ngwugwu Linux Gentoo. Ihe ha na ya na nkesa ndị ọzọ bụ apt (Debian na nkwekọrịta), yum (Red Hat, SUSE, na nkwekọrịta) , pacman (Igbe na nkwekọrịta)... O sitere n'ike mmụọ nsọ Ports site na FreeBSD, nke ahụ bụ n'ihi na onye guzobere Gentoo jiri oge FreeBSD wee si n'ike mmụọ nsọ na myirịta n'ọtụtụ ụzọ. Edere na bash na mmalite na pụta (aha mmemme ahụ nke na-ahụ maka nrụnye ahịrị iwu) n'akụkọ ihe mere eme ya niile enwegoro ntọala sara mbara ma nwekwuo Python iji rụọ ọrụ ya.
Gịnị mere o ji dị mkpa ịma nke a?
Ọfọn, dịka onye ọrụ Linux ọ bụla, njikwa ngwugwu bụ ihe kachasị mkpa iji mee ka sistemụ gị rụọ ọrụ ma rụọ ọrụ, ọ na-enye gị ohere ịwụnye, melite, wepu, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọdụ ụgbọ mmiri e kewara ya na iwu di iche iche puruiche n’ime ihe, na ime ya nke oma (uzo eji ewu ewu na UNIX).
N'adịghị ka ndị njikwa ngwugwu ndị ọzọ (ọbụlagodi ndị m kwuru na mbụ), Ọdụ ụgbọ mmiri ọ na-agbanye ike ya niile na faịlụ nhazi. Faịlụ a dị n'ime ụzọ /etc/portage/make.conf . N'oge a, ọ siri ike ịkọwa usoro dị mgbagwoju anya dị na Gentoo nke na-enye ohere ịnye ike niile nke nkesa na faịlụ a na-enweghị imebi ihe ọ bụla ọzọ, mana ka anyị gaa n'ihu na m ga-ahapụ nke ahụ maka ọkwa ọzọ 😉
A lee anya na obi:
Nwe. Christopher Diaz Riveros
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụghị ihe si n'ụwa a, n'ezie, enwere m faịlụ ndị ọzọ akọwapụtara nke ọma, mana ihe dị ebe a karịrị iji nweta ọrụ ọrụ Gentoo gị yana arụ ọrụ. Ka anyị bido nyochaa usoro ndị na-eso:
EBERE / NWOKA:
Nzọụkwụ mbụ nke njem anyị n’ime obi Gentoo bụ ọkọlọtọ C. Ọkọlọtọ ndị a na-enye gị ohere ịchịkọta mmemme C (nke kachasị mkpa na usoro kwesịrị ịrụ ọrụ) yana ụdị uru dị iche iche. Dịka ị pụrụ ịhụ na nhazi m, -march = broadweel na-enye m ohere iji ọgbọ nke nhazi m mgbe m na-achịkọta mmemme m. -O2 na -pipe abia na ndabara, ma oburu na m kwusi ikowara onye obula o gha ewe m ma o buru akwukwo.
Agbanyeghị, lee ụdị mkpọtụ ole na ole kọwara na Gentoo wiki.
OSTLỌ CHLỌ na-ahụ maka igosi ọnọdụ ndabara na ụdị nke compiler ahụ, a na-eji mgbanwe a na kọmputa nwere ụdị nchịkọta dị iche iche, dị ka ndị Arduino fans. Maka nhazi nhazi ọ dịghị mkpa ịbanye na nkọwa.
Ihe edemede chepụtara: Daalụ maka ntinye gị njọd, na maka isoro ndị obodo gị kerịta ihe ọmụma gị 🙂
Ihe mgbanwe sistemụ a egosighi dịka ọnọdụ nke onye na-achịkọta ya, kama ọ na-egosi na onye na-ahazi nhazi ihe nhazi ahụ, na nhọrọ nke ngwaike ngwaike, sistemụ arụmọrụ yana Ọbá akwụkwọ C nke a ga-achịkọta nchịkọta ahụ n'agbanyeghị na mgbanwe a kọwaa ụwa niile n'ime make.conf (dị ka ihe ọ bụla ọzọ pụtara ebe ahụ) ọ nweghị ihe na-egbochi gị ịnakọta nchịkọta maka ụlọ ndị ọzọ.
Obi mmemme, USE flags nke make.conf bu uwa niile. Site na nka m kwuru ọ bụla mmemme nke nwere iji XN'oge a chịkọtara ya, ọ ga-arụ ọrụ X rụọ ọrụ. Nhọrọ a bara ezigbo uru maka ọkọlọtọ USE ndị ị ga-eji n'ọtụtụ (ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha niile) nke mmemme gị. Ka i si hụ, gnome y systemd ha na-eme ka sistemu m chịkọta nkwado maka ụdị mmemme a n'ime sọftụwia ọ bụla nwere ya.
Nke a bụ otu uru kachasị mma nke ngwa ngwa ngwa ngwa. MERE dị ka aha ahụ pụtara, ha bụ nhọrọ ndị agbakwunyere na nkwupụta ahụ -eme ka a na-agba ọsọ mgbe ị na-achịkọta usoro ọ bụla. na nke a -J9 o na enyem ohere ichikota 9 program n’otu oge, 1 maka threadi obula na kernel m7. Onu ogugu kariri ala bu -J5, ma ọbụna ebe a, oge nchịkọta na-ebelata ntakịrị maka nrụnye ọ bụla.
Oh oh… ugbu a ha ga na-eche… ihe bụ ndị na nọmba? na ebe ma obu olee otu m si mara ihe itinye ebe a? Azịza ya bụ njirimara kacha mkpa nke Gentoo 🙂 na-enyere obodo aka 😉 ndị megoro mmemme maka gị. Iji gosi nke a, ịkwesịrị ịwụnye usoro ihe omume a ma mee ya:
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọ na-egosi m FLAGS nke onye nhazi m nwere ma enwere m ike i copyomi ha na faịlụ make.conf site na iji redirects ma ọ bụ ide ya na nano, vim, ma ọ bụ ederede ederede ọzọ 🙂 (will ga-ahụ etu akpaghị aka ihe niile dị na Gentoo )
Naanị ndekọ ebe mgbọrọgwụ ebuilds na-amalite. Ndị a bụ ndị Bash n'ihendesịta na-ekwe ka portage iji wụnye mmemme, ma anyị ga-ahapụ nke ahụ maka ọzọ post 😉
Dị ka Gentoo na-etinye ihe niile site na isi iyi ya, ndekọ a ga-echekwa koodu isi niile anyị na-ebudata, ọ bụrụ na-ịchọrọ ị nwere ike ihichapụ ọdịnaya ya site n'oge ruo n'oge, mana enwere ọtụtụ ojiji ndị ọzọ na-atọ ụtọ maka mmemme ndị a, mana maka ọkwa ọzọ 😉
Ọfọn, dị ka aha ahụ pụtara, akara nke kaadị vidiyo gị, nke a na-egbochi gị ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala mgbe ị na-etinye ihe ndị dị ka X ma ọ bụ Wayland.
Ebe dị mma iji nwee ike ịgbakwunye asụsụ niile ịchọrọ ka usoro gị kwado, n'ọnọdụ m achọrọ m ịnweta Spanish Spanish, mana enwere ike ịgbakwunye ka enwee ike ịgbanwe ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Nhazi ma ọ bụ ọkwọ ụgbọala gị na-arụ ọrụ, ebe m na-eji GNOME, ntọhapụ na-elezi anya na aka m. Nhọrọ ọzọ a ma ama nke a na-edochi bụ synaptik.
Ndị maara banyere mmemme ga-ama ihe kpatara enweghị ihe ọ bụla na nke gara aga, mana, lee ka o si arụ ọrụ nke n'ọtụtụ asụsụ mmemme 😉.
Ihe mgbanwe ndị a na-enyere anyị aka ịmata asụsụ nke mmemme arụnyere, na nke m, Bekee na Spanish dị mma.
na Ebumnuche ha na-egosi ụfọdụ ọrụ pụrụ iche nke Linux arụ ọrụ. O kwere omume inwe nsụgharị dị iche iche na-ebikọ ọnụ n'otu usoro ahụ. Nke a pụtara na enwere m ike ịnwe Ruby 21, 22, 23 na 24 n'otu oge na enweghị esemokwu, otu dịka Python, Apache, Tomcat, MariaDB, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. A na-akpọ ọrụ a oghere na obodo anyị ma ọ bụ isiokwu nke post zuru ezu, yabụ anyị ga-ahapụ ya maka ohere ọzọ 😉
Ebe ndị ị ga-idetu nchịkọta ebuilds gị, na-eje ozi n'ụzọ pụrụ iche iji nwee ike ịnweta ebe ị na-eme mmekọrịta. Enwere m nkwado abụọ a, ebe ọ bụ na m na-ebudata ndepụta ebuild m ozugbo na Github, ọ bụkwa naanị ihe dị mkpa iji mee ka ị budata (doro anya, Gentoo na-eme m ya mgbe m dere iputa –sync)
Ndị a abụghị nhọrọ niile ime.conf, e nwere ọtụtụ ndị ọzọ, ma eleghị anya, ụfọdụ ga-ekwe ka ukwuu uru ma ọ bụ nhazi, ma ndị na ọ bụ karịa iji nwere a ọtọ usoro system
/ wdg / portage:
Ana m eweta ntakịrị ihe dị na folda a, naanị ka ị nwee ike ịmata ihe ga-eme ka amata na ihe anyị ga-ahụ n'ụbọchị ndị a na posts 🙂
Ebe ọ bụ na enweghị m ike ịkwụsị ịza ajụjụ karịa, aga m aga n'ihu ntakịrị ma gosi gị akụkụ pụrụ iche nke folda a, faịlụ ahụ eme.profile. Profaịlụ Gentoo na-enye gị ohere iwepụta nhazi pụrụ iche maka ụdị onye ọrụ ọ bụla, yabụ ịkwesighi ide ma ọ bụ mara USE niile, ma ọ bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ị nwere ike ịhọrọ profaịlụ ma bido na nke ahụ. Nke a bụ ndepụta nke profaịlụ dị ugbu a anyị nwere na Gentoo taa.
Dịka ị pụrụ ịhụ, a họpụtara profaịlụ m na amd64, desktọọpụ, yana GNOME na iji systemd. Site na ịhọrọ profaịlụ a, m na-ahụ na ọkọlọtọ eji US na ntọala ndị ọzọ bụ opekempe achọrọ iji nwee sistemụ m, yana dabere na m na-eme mgbanwe. (O doro anya na otu ma ọ bụ nke ọzọ kwenyere na ọ ga-eche echiche site na ncha ... nke ahụ bụ ụgha ebe a 😉)
Dịka anyị pụrụ ịhụ, enwere ọtụtụ profaịlụ, nke ọ bụla nwere uru nke ya.
Ọfọn, ọkwa ọzọ adịghị n'aka m maka anya gị 🙂 Enwere m olile anya na ị nwekwaghị ndidi na ọchịchọ ịnwale Gentoo 😀 yabụ enwere m ike inwe mmetụta ka ukwuu mgbe m na-eke ntuziaka nwụnye. Ekele mmadụ niile,
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Gentoo: Obi nke anụ ọhịa
Ihe 23 kwuru, hapụ nke gị
Eduardo Vieira dijo
Ezigbo mma post usoro. Achọrọ m ịma banyere Gentoo. Ana m eji Arch na BtrFS na Snapshots ugbu a dị ka sistemụ arụmọrụ kachasị. Naanị ihe na-akwụsị m bụ na PC m dị ugbu a adịchaghị ike (core2duo) ọ ga-ewe ruo mgbe ebighi ebi iji chịkọta nchịkọta niile m nwere. Mgbe m zụrụ PC m ọzọ m ga-anwale Gentoo.
Zaghachi Eduardo Vieira
Ndewo Eduardo 🙂 daalụ maka okwu gị, ha na-agba m ume nke ukwuu, ugbu a isiakwụkwọ na-esote n'usoro ahụ na-apụta, ọ dịkwa nso na ntuziaka nwụnye Gentoo 🙂 Achọrọ m ịkọwapụta ihe ole na ole tupu ịmalite ọkwa ahụ. nke ahụ ga-enyere ọtụtụ aka ịwụnye usoro ha. Cheers!
Anọ m na-achịkọta gentoo ọtụtụ afọ gara aga na p2 na 300mhz na 64 ebule. obughi onu. n'izu ị nwere ihe niile njikere 😀
Zaghachi na pablot
Eziokwu bụ na ọ na-akpali m ịwụnye Gentoo na
N'oge na-adịghị, n'oge na-adịghị 😉
Ibe nke post! dị ka ndị gara aga, belụsọ na na nke a, m ga-anwa anwa ịhapụ gị nkọwa:
CHOST -> Ihe ngbanwe usoro a egosighi dị ka ọnọdụ nke onye na-achịkọta ya, kama ọ na-egosi na onye na-ahazi nhazi ihe nhazi ahụ, na nhọrọ nke ngwaike ngwaike, sistemụ arụmọrụ na ọbá akwụkwọ C nke a ga-achịkọta nchịkọta ahụ n'agbanyeghị na mgbanwe a bụ akọwapụtara ụwa n'ime make.conf (dị ka ihe ọ bụla ọzọ pụtara ebe ahụ) ọ nweghị ihe na-egbochi nchịkọta nchịkọta maka ụlọ ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na ị naghị ajụ m, mgbakwunye: Echere m na n'oge a ọ ga-adị mma iji mee ka o doo anya na isi uru dị na iji Gentoo (na nkwekọrịta) karịa nkesa ndị ọzọ, enwere ike ịhazi ihe niile, ọ bụghị naanị ngwaike gị, kamakwa ihe masịrị gị na amamihe gị, dị ka ohere ị wụnye sistemụ arụmọrụ 100% na-enweghị dabere na Poettering bodoques [SystemD, pulseaudio na NetworkManager] (Enwere m olileanya na agha ụwa agaghị agbapụta ebe a>. <) , dochie ha na OpenRC (System init mepụtara site na obodo Gentoo n'onwe ya, ezigbo mkpuru ma ọ bụrụ na ị kwe ka m kwupụta ya) (ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọzọ nghọta na ngwa ngwa ọ na-akwado runit), alsa na wpa_supplpicant, karị; na nke m na-ekwu Haleluya !!! = P
Chaị, i meela nke ukwuu maka onyinye 🙂 dị ka ebe niile, na-amụ ihe ọhụụ mgbe niile 😀 na ee, ekwughi m na nke a, mana m kwesịrị ikwu na ọ dịka ihe niile dị na make.conf, ọ nwere ike ịkọwa ọtụtụ ihe na faịlụ dị iche iche ma ọ bụ akụkụ ndị ọzọ nke usoro ahụ.
Daalụ maka nkọwa ahụ ma enwere m obi ụtọ ịgwa gị na ọ bụ eziokwu 100%, mkpuru nke Gentoo bụ ikike ịhọrọ sistemụ gị, yana ihe ọ bụla masịrị gị na ihe ọ bụla ọzọ.
Enwere ugbua ole na ole gbasara ịpụ apụ, olile anya na ndị editọ ga-enyocha ha 🙂
M na-eche ma ndị editọ nwere ike inye m ikikere ndị dị mkpa iji tinye ozi gị na elu 🙂 ọ bụrụ na ha ahụ nke a, ọ ga-enye aka inyefe ozi dị mma 😉 ekele
Edeela m gị site na mkparịta ụka gmail na akaụntụ gị, gụọ ya !!
Ngbaghara 64 dijo
Na-atụ anya na post na-esote, na-enwe nnukwu agụụ ịnwale gentoo, na-atụ anya na ọ gaghị ewe ogologo oge, ekele ma debe ya.
Obi dị m ezigbo ụtọ na ịmata ihe gị na-egwu gị 😀 nke pụtara na anyị nọ n'ụzọ ziri ezi \_ o / ekele na ekele maka ịkekọrịta 🙂
Ihe ndị a ga - abụ ihe nduzi, kamakwa iji gbaa gị ume ịwụnye Gentoo.
M ga-enwe dị ka akwụkwọ na-eduzi ndị a posts maka ọdịnihu. N'ihi na echere m na m ga-enwe afọ ojuju karị ma ọ bụrụ na m wụnye Gentoo na PC na usoro nhazi ọhụrụ. PC m dị ugbu a dị ntakịrị. Mgbe m ga-aga n'ihu na Arch Linux.
Claro Mart 🙂 nke ahụ bụ echiche, nwee ntụsara ahụ na kọmputa gị. Enwekwara m Arch part ma oburu na Gentoo adighi adi, aga m eji Arch kwa ubochi, ya na Kali m Linux posts More posts ga-abia n’oge na adighi anya ma agafeela onye ndu 😉
Ọfọn, maka isi usoro nchịkọta ahụ adịchaghị ogologo na maka desktọọpụ ọkụ (dịka xfce ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ lxde) ma ọ bụ ndị njikwa windo dị ntakịrị (dịka i3, igbe mbata, fluxbox, egwu, wdg) ọ dị mkpụmkpụ. Ugbu a gburugburu siri ike ma zuru ezu na desktọọpụ (dị ka gnome, kde ma ọ bụ cinamon) ga-ewe oge. N'agbanyeghị nke ahụ, N'ụzọ dị ịtụnanya, ihe na-ewekarị oge iji chịkọta bụ ihe nchọgharị weebụ (dịka firefox ma ọ bụ chrome, mana enwere ihe nchọgharị dị arọ dị ka qutebrowser ma ọ bụ palemoon nke nwere ike iwe obere oge) na ụlọ ọrụ akpaaka. Ya mere, gentoo na-enye ọnụọgụ abụọ maka mmemme ndị ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe arụ ọrụ iji dozie ebe mkpokọta ahụ mere.
Ọ bụrụ na ị nwere kọmputa nwere kọmputa abụọ, echere m na ọ ga-ezu iji chịkọta sistemụ ahụ n'ihe dị ka awa abụọ ma ọ bụ atọ (yana m pụtara awa ole na ole ma ọ bụrụ na ịhọrọ desktọọpụ siri ike dị ka kde ma ọ bụ gnome) mana maka ikpokọta ihe nchọgharị na ọfịs akpaaka m na-akwado ime ya n'abalị, na-ahapụ pc na ịme ihe ya ma ọ bụ jiri ọnụọgụ abụọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ
maxlinux 2000 dijo
ugbu a, o ruola inye gi nsogbu oo
na-arụ ọrụ na nkesa ọ bụla "debian based" dị ka ubuntu, mint…. ma chịkọta ihe niile kachasị nchịkọta maka cpu gị.
Hahaha anaghị ewute gị ma ọlị, ọ bụ inwe ike ịhọrọ. Obi dị m ụtọ ma ọ bụrụ na ha eme ya na Debian, mana amaghị m ụwa ahụ, a bịara m ịkekọrịta ihe na-atọ m ụtọ gbasara nkesa m 🙂 yana ọfụma na Debian a na-asọpụrụ nwekwara ụdị nhọrọ ọ họọrọ 🙂
Ọ maghị. Ọ na-ada ụda na-atọ ụtọ, mana gwa m ihe na-eme na mmelite ahụ. ngwa-iwu na-ejikwa ha niile, jiri ntụkwasị obi ha niile, dị ka Gentoo, ka ị ga-eji aka wulite ha niile? Na nkwado apt ọ dị ka Gentoo?
Ọfọn, ozugbo awụnyere, mmelite ahụ nwere otu iwu nke na-edozi ntụkwasị obi niile "pụta -ask –update –deep –newuse @world" ma ọ bụ ụdị ya dị mkpirikpi "emerge -avuDN @world" nke mere na ọ na - eme ka ndị niile dabere na ya n'otu oge ahụ ka ịgbanwee na mmemme kachasị dị ugbu a
Amaghị m ma ọ pụtara debian ma ọ bụ gentoo, mana maka debian ọ bụ kpochapụwo:
na nke a, ọ na-ewetu ndepụta nchịkọta iji melite, mgbe ahụ ọ na-ebudata isi mmalite, na-achịkọta ma na-etinye ya na ihe niile na akpaghị aka.
Mana n'ezie, ọ nweghị nkesa ka mma. Ha niile dị mma. Ọ ga-adị ka ịjụ asụsụ kacha mma.
Free Quixote dijo
Ọ dị mma maka nke ahụ! 😉
Zaghachi na Free Quixote
Isiokwu ahụ dị ezigbo mma, enyi m, ma ana m akwado ka ị zere okwu gringo nke na-eme ka ị na-ata ikikere ezé, dị ka "wow" ahụ jọgburu onwe ya nke yiri ka ọ dị ọcha onwe onye maara ụwa nke atọ xD. Ka anyi jiri asusu anyi mara nma, nke juputara zuru oke ma nwekwaa oke zuru oke ma nwekwaa ezi okwu karia asusu mbu nke gringos xD. Mgbe oku mmuo anyi nwere ndi Hispanik gbara ka nkita ("wow = wow")? xD.
Isiokwu, na-akpali nnọọ mmasị. Enwere m kọmputa ochie na-erughị ala nke ga-eme ka m chọọ ịnwale na ụwa ndị mmadụ. Ma na tartan m dara ogbenye na-etinyekwaghị usoro ntọala ga-ewe m ọtụtụ ụbọchị xD.
: / n'ezie dị ka ọ bụtụghị ebe m nọ. Ọ bụrụ na ị si Spain, enwere ike ịghọta ya karịa m, mana ebe a na Latin America English bụ ihe a na-ahụkarị, yana karịa karịa ... ka ị nwere ike iche n'echiche mgbe ị na-elele maapụ ndị mmepe nke Gentoo (ndị mụ na ha na-eme ụbọchị) ọ dịghị onye dị na South America ma ọ bụ Spain ... ọtụtụ ụbọchị m na-asụ Bekee na ụfọdụ okwu na-arapara ...
N'ihe banyere ụzọ m si ede ihe, m ga-enwe obi ụtọ na m gaghị etinye ndị tozuru etozu banyere ya, ma karịa karịa ịtụle ihe language asụsụ ọ bụla nwere uru na ọghọm ya, yana Linux onye ọ bụla nweere onwe ya ịhọrọ 🙂
Banyere igwe, ị gaghị ama ruo mgbe ịnwale 😉 usoro nchịkọta dị ngwa ngwa maka ọtụtụ nchịkọta, ma eleghị anya, ndị kachasị arọ dị ka Firefox ma ọ bụ thunderbird ga-ewe ogologo oge, mana Gentoo na-edozi nsogbu ahụ site na ịpịpụta ụdị ọnụọgụ abụọ (ụdị nkịtị ) wee chịkọta oge belatara na ndị arọ mmemme ards ekele
Dị ka obi Larry.